Omume ndị isi na-eme ka ọnọdụ dịkwuo mma? - Mmega
Isi > Mmega > Isi omume maka postcho - nkịtị azịza
Omume ndị isi na-eme ka ọnọdụ dịkwuo mma?
Mkpụrụ ahụ dị n'ihu ahụ gị, a na-akpọkwa gịisiakwara, nwere ike imetụta ike gị iji nọgide na-adị mmapostcho. Onye siri ikeisina-enyere gị aka iguzo ọtọ ma na-eme ka akpati gị kwụsie ike n'oge gịrụpụta- ma ọ bụ ọbụlagodi ka ị na-eme ihe omume gị kwa ụbọchị.05.04.2018
Jo na Khaleesi, Queen nke ocheeze ígwè. taa m ga-egosi gị ise omume maka a mma postcho.
Ya mere, ka na-amalite. Omume izizi mbụ bụ mbuli elu agba. and i nu ka m na ekwu okwu banyere wrinkles nke my chin otutu oge.
Echere m n'ezie na ha bụ olu mgbu kachasị mma na mmega ahụ mmezi n'ihi na anyị na-ebute isi anyị n'ihu otu a n'ụbọchị. Maka ọnọdụ ka mma, ịkwesịrị iweghachi agba gị ọzọ. Nke ahụ bụ ihe Achin Tuck bụ.
Ọ baghị uru ka isiri wepụta onwe gị otu a, ọ na-ewe iwe gị ma tinye ya ebe ị ga - ejedebe ọtụtụ obere chins. Ya mere, ihe ị na-achọkarị ịme, ihe m ga-eme bụ naanị itinye mkpịsị aka m n'agba m, dị ka ihe mgbaru ọsọ, yabụ ikwu okwu, yabụ, m ga-edebe mkpịsị aka m n'otu ebe wee dọpụta agba m azu ka mpi agba m. Naanị jide ya ihe dị ka sekọnd 3-5. ekwesighi ịdị ogologo ma zuru ike. na mgbe ahụ ị na-enwekarị obere oghere n’etiti mkpịsị aka gị, nke na-egosi na ị na-agbazi ọnọdụ ahụ ntakịrị.
Yabụ ọ bụ ụzọ dị mma iji hụ otu ị na-eme, mana ịkwesighi. Naanị ịchọrọ ịmara, were ya, isi gị dum laghachi azụ na nke ahụ bụ nkedo na agba gị ebe ị tinyere ya. Jide ya ọzọ maka sekọnd atọ ruo ise, ma eleghị anya naanị mee 5 n'otu oge ma ị nwere ike ime nke a ọtụtụ oge ofụri usen. karịsịa ma ọ bụrụ na ọnọdụ gị dị njọ. karịsịa mgbe ị na-arụ ọrụ na kọmputa ụbọchị niile na n'ụzọ ụfọdụ dabere na-atụ dị ka. mgbe nke na-esote bụ naanị ụdị mgbakwunye na agba agba.
Ya mere, ị banye n'ime mbuli agba ma ka ị na-agbaji agba gị, ị na-apịa ubu ma ọ bụ ubu. Naanị nke ahụ ga - eme ma ọ bụrụ na ị ga - ewere ubu ndị ahụ n’azụ gị wee pịakọta ha ọnụ. odika ochoro ichoro na aka m di na spain gi ma na acho igbutu aka m na ubu gi.
Ya mere, ị banye n'ime mkpuchi nke agba gị, tinye ya n'akpa ahụ, wee kpoo nkuchi ubu gị azụ. Ya mere, lee, ana m emebiga ihe ziri ezi, mana ị chọrọ ịgafe ya iji mee ka ọnọdụ a mara. Sere na Sochin, kpoo ubu gị azụ, jide ya ọzọ ruo sekọnd atọ ruo ise wee zuru ike.
Yabụ, iji igwe pịa, ị na-eji uru ahụ mee ka isi laghachi azụ. Nwere ike iji ikpere aka gị duzie ebe ahụ, mana ị na-agbanye mọzụlụ ọnụ. Na-emeghaghị ikpere aka gị naanị.
Na-agbanyeghachi ya, dọba agba gị, jide ya sekọnd atọ ma ọ bụ ise, mee ya ugboro ise ma ọ bụ iri ụbọchị niile. Iji mee ka o siri ike ntakịrị, buru naanị teepu akaghị aka. Nke ahụ dị mma, mgbe m nwere ọgwụgwọ ubu afọ ole na ole gara aga, otu n'ime ndị na-agwọ ọrịa m na ya rụkọrọ ọrụ kụziiri m nzọụkwụ a. na ọ na-ese mfe, ma mgbe ị nweta ya ọ bụ n'ezie mara mma ike.
Ya mere, ị na-abanye na nkedo nke agba gị, ị na-aga na mwekota ubu, weghachite ubu ubu gi n'azu, ikpere aka ga-adị n'akụkụ gị ma ị ga-etinye mgbatị na ụdọ ahụ. ya mere, kwusi ebe a. ị laghachiri azụ, ị dọghachi azụ, mgbe ahụ, ị ​​ga-efegharị ubu gị wee gbadata.
Yabụ ugbu a, ị na-azụ akwara olu gị, okpokoro ọnya gị, ọnyà elu gị, ihe ndị a niile. N'ihi ya, m na-eweghachite agba m azụ, na-adaghachi azụ, na-atụsi ike, na-eme ka ikpere aka m n'akụkụ m, wee gbagote na-agbada ọzọ. gbalịa idobe ya ọnụ.
Yabụ ọ nwere ike ịdị nfe ọzọ, mana ị ga-emekọ ya ọnụ. Ya mere, ọ bụrụ na m mee nke a ma enwetaghị m ubu, anaghị m eme ya. Chin up, squeezeback, gbalaga na-eguzogide, gbagote, gbadata na-enweghị na-ewebata gbalaga na.
Ọzọkwa, ọ siri ike karịa ka ọ dị. Naanị m na-amalite na ise ma ọ bụ na-eme ya ugboro ole na ole n'ụbọchị. Malite na eriri ọkụ dị egwu ị nwere.
Agba dị iche iche dabere na ika ahụ, yabụ gbaa mbọ hụ na ọ bụ ọkụ ma ọ bụ na ị ma na ọ bụ ya kachasị dị mfe n’ihi na ọzọ ọ siri ike karịa ka ị chere. I nwere ike iche na ọ dị mfe, mana ọ bụrụ n’iche na ọ dị nfe, ikekwe ị naghị eme ya ọfụma. yabụ ndị ikpeazụ ga - eguzo na otu mgbochi.
Yabụ maka mmemme abụọ gara aga, ịchọrọ ịjikọ otu ndị na - eguzogide ma ọ bụ ọnụ ụzọ ma ọ bụ nye onye dị omimi n’azụ ákwà mgbochi na - ejide ya ma ọ bụ onye jidere ya na - ejide n’ihi na ị chọghị ka ọ laghachite mara gị ụra n'ihu. Ya mere, jide n'aka na ọ na-anchoro gị tupu ị na-agbalị a. Ugbu a, anyị na - akpọghachitere gị na ọzụzụ ọzụzụ gị.
Ya mere, n’oge a ị chọrọ ịgbachi ya gburugburu ka ị ga-ejidesi ya ike. Mgbe ị na-eme ngagharị, ọ na-amasị m ịmegharị ọnọdụ m. ụfọdụ ndị ga-eguzo n'ụzọ ahụ, mana ha ga-anọdụ ala ma na-agbada azụ ha.
Chọghị nke ahụ. Chọghị ịrụ ọrụ na otu ihe wee merụ ihe ọzọ ahụ. Ya mere, onye na-esote ga-arụ ọrụ na ọnyà ndị dị ala.
Ọzọkwa, nke a bụ mmega ahụ mara mma iji mepee obi ahụ ma nweta ọnọdụ ka mma. Yabụ ị ga-abanye n'ọnọdụ a dị nzuzu. Gbalịa mee ka azụ gị kwụ ọtọ ma ị ga - eme ihe ị ga - akpọ ihu.
Ya mere, ị gbagote, dọrọ gaa n'ihu gị, wee wulite teepu ahụ, laghachi azụ, wee pụta, mana chịkwaa mmegharị ahụ. Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ijikwa teepu ahụ, agala ọsọ ọsọ. Jikwaa ya nke ọma maka iji nwayọ nwayọ nwayọ, kwagide, laghachi na ihu gị, wee hapụ ya. ya mere nke a siri ike karịa ka ọ dị.
Ya mere, jide n'aka na ị ga - ebido na ise ma ọ bụ iri na teepu kachasị mfe ị nwere wee mee nke a ugboro abụọ n'ụbọchị. mgbe nke ọzọ ga-aga nke ọzọ. Yabụ ugbu a ị laghachi n'usoro oge niile. isi aka n'ụzọ ụfọdụ. ị na-abịa n'ahịrị.
Na-ewedata aka gị ala, mepee ọbụ aka gị pụọ n’ebe ị nọ, wee dọghachi gị azụ n’azụ. Laghachi ma wulite ha, wee laghachi. Ya mere ana m eme ya nke ukwu, mana nke ahụ bụ atụmatụ ugbu a.
Soro ala, pụọ, banye were gabazie. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị nweta ihe ndị a, ha siri ike karịa ka ha dị. Ya mere, gbaa mbọ bido n’obere oge wee sie ike.
Yabụ n'ebe ahụ ị nwere ya, mmemme mmega ahụ ise. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịkwado ọwa m, pịa njikọ dị n'elu ma echefula ịdenye aha. Ebee? right there na-agbaghara QueenKhaleesi. ma cheta, dị njikere, nwee anụrị ma nwee olile anya na ị ga-aka mma n’oge adịghị anya.
Omume ndị dị a helpaa na-enyere aka melite ọkwá?
Mmegaiji mee ka isi gị, akwara azụ na akwara obi dị ikega enyere akaedozi ubu kwesiri:
ọdụ ahịrị na mgbatị ma ọ bụ mgbatị.
Kedu ihe bụ isi mmega ahụ 5?
Bob na Brad ♪♪ Physiotherapists abụọ a kacha mara amara na ịntanetị - Hi ndewo, Abụ m Bob Schrupp, Physiotherapist - Brad Heineck, Physiotherapist - Anyị niile bụ ndị ọkachamara n'ihe banyere physiotherap na ịntanetị - N'echiche anyị, nke N'ezie, Bob. Taa, anyị ga - egosị gị ise mmega ahụ kachasị mkpa ị ga - eme kwa ụbọchị. Ha dị oke mma maka azụ gị.
Ọ bụrụ n’inwere nsogbu azụ, ịnwere ike ịnwale ndị a ma ọ bụrụhaala na ha emerụghị ahụ. Mana ọ bụrụ n’inweghị nsogbu azụ, nke a bụ ụzọ dị mma iji gbochie ha. - Ziri ezi. - M kwuru oké. - Eeh. - Akwa - - Ee, ọ dị ka katuun ahụ.- Flub.Fudd- (ọchị) Elmer Fudd. - Elmer Fudd.Oka, n'ụzọ, ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụrụ na ọwa anyị, biko were nke abụọ iji denye aha anyị.
Anyị na-enye edemede gbasara etu ị ga-esi gbasie ike, dabara adaba ma nwekwaa mgbu na anyị na-ebugo ha kwa ụbọchị na bobandbrad.com, gaa na ngalaba inye ego. Anyị na-enye ihe mgbe niile.
Anyị na-enye ụfọdụ n'ime usoro ọrụ anyị. Ha dị ise. E nwere agba dị iche na ike dị iche iche.
Ma ị nwere ike iji ha maka ụyọkọ mmega ahụ. Nri, Bob. Ha na-ejikwa ịlesụ.
I nwekwara ike ịga na bobandbrad.com ma ọ bụ Bob na Brad na Facebook. A ga-atụgide asọmpi ahụ n’elu peeji a.
Na Twitter, Instagram ma ọ bụ TikTok ọ bụrụ na ịchọrọ ụdị nke 60 nke usoro ihe omume anyị. - Ka a pụọ! - Na na na, ka na-amalite na mfe otu, Brad. - Chọpụta. - Ugbu a ị ga - eme nke a n’ala.
Gaghị eme ya n’elu akwa. I nwere ike inwe ike, mana ọ ga-abụ ihe siri ike.-Nri.-Ya mere, ihe mbụ ị ga - eme bụ naanị ijide mmiri dị mfe.
Yabụ na ị ga-ebuli ahụ gị elu, ị ga-enweta usoro kwụ ọtọ ebe a. Na-ewusi ụfọdụ akwara buru ibu ebe a, mana ị na-ewusi azụ gị ike. Ma ọ bụ ihe ị nwere ike iji ezigbo usoro 15 reps na multifidi na akwara ndị ọzọ dị ala.
Ha niile na-arụkọ ọrụ ọnụ ka ị ghara ikewapụ onwe gị iche, ị chọrọ ka ha rụkọọ ọrụ ọnụ. - N’ikpeazụ, ị ga-aga ebe a. - Oh ee ọzọ - Tinye akụkụ ọzọ, Brad.
Ya mere, oge 15 dị mma, mgbe ahụ ị na-eme curls. - Na-enweghị barbell? - Ọfọn, gị, M tinyere aka m n'okpuru ebe a maka nkwado. Just tinye isi gị elu.
Emela otu a. Lift bulie ogologo. - Ya mere ị na-ebulikwa ubu gị? - Ee - Ya mere, ubu ubu na-ahapụ ala? - Ọ bụrụ na ha nwere ike. - Ee.- Ma ma ị kwenyere ya ma ọ bụ na ikwenyeghị, mgbe ịmalitere olu m na-afụ ụfụ.- O doro anya, ọ dị ka ya.- Ee, na oge ụfọdụ akwara olu siri ike ebe ọ naghị enye m nsogbu ọzọ.
Ma m na m ga-eme ya, ugbu a, m na-eme ya n'ụzọ ahụ. M na-emegharị ụkwụ m n'ezie mgbe m na-eme curls - nke na - eme ka ọ maa mma - na - eme ka o sie ike, ee - yabụ ị ga - etinye aka gị n'okpuru ya iji kwado azụ gị. Ya mere, ozugbo n'elu eriri eriri.
You nwere ike iche na ọ dị mma? - Ee kpọmkwem. - Ọ dị ka ọ na-akụkwa mma karịa. - Ee, ị chọghị.
Enweghi m ike iru ala, nke siri ike ime na-enweghị curls. - Chọpụta, ee. - M pụtara, rue curls zuru ezu.
Odi nma, plank ozo na akuku. Ma ugbu a ị nwere ike ịmalite, ọ bụrụ na ị na-amalite ugbu a, ị nwere ike ịmalite ikpere gị. You ga-ebulikwa onwe gị elu otú ahụ.
Ọzọkwa, nke a ga-enweta ụfọdụ n'ime akwara ndị ahụ na-emegharị afọ. - Yabụ nke a ga-abụ ụzọ ịmalite, ọ bụrụ na ịnweghị Ore, mgbe ahụ i nwere ike iru ikike gị zuru oke - Ee, wee tinye otu ụkwụ n'ihu nke ọzọ, wee bulie - Ee, enwere airspace, ma igwe okwu ya na-abanye (giggles)) .- Anọ m na ngwụsị nke ute, nke na - eme ka m maa jijiji - Ee, ị maara, okpokoro niile na-ama jijiji? - Tebụl ahụ niile (chịrị ọchị), ee - Tebụl a, site na ihe na-ada otu ụbọchị, ana m eme agadi, echere m na ọ dị afọ 15 - yabụ m na-eme ya, Brad, achọrọ m, m gụrụ ruo 30, mgbe ahụ, m na-eme usoro ọzọ site na 30.
Dá »‹ kwa na-bá »is na-aga n'ihu plank. You'll ga-eweli aka gị elu. Ugbu a ị nwekwara ike ịmalite ikpere gị.
Ọ bụrụ na ị dị ọhụụ, azụ m ọ kwụ ọtọ, Brad? - Ọfọn, bum gị dị ntakịrị elu, Bob.- Kedu ka ị mere? nke ahụ? - Ya mere ntakịrị ala n’okpuru. Na-eme plank? - Ee ee ị ga-arịgo otu a, mana ị tụgharịkwara pelvis gị.
Don'tgaghị otu ahụ, ị ​​na-atụgharị ihe niile. - Nke mere na ọkpụkpụ azụ na-anọ n'okike. - Nke a bụ otu ị si akụzi spain gị ka ọ gbanwee ihe niile ka ọ dịrị na-anọpụ iche ma nwee obere nchekasị.
M nwere ike na-eche na ọ na mgbe m na-eje ije dị ka nke a, Brad. Ọ na-ewute ya n'ezie. - Ebee? - Na azụ m, nke ọma, mgbe m na-eje ije otu ahụ, ọ naghị.
Ọ naghị afụ ụfụ mgbe m-- Oh, mgbe ị gbanwere ya? - Ee, bezin. - Nke ahụ bụ ihe ịchọrọ ịnụ. Ọ bụrụ na otu n’ime ndị a na-akpasu gị iwe ma na-akpata mgbu azụ, emela ha.
Agaghị m eme ụfọdụ n'ime ihe ndị a n'ihi na m na-atụgharị uche, ọ bụ ya mere Bob ji eme nke a. - Ee, nke ahụ siri ike karịa. Ma ị nwere ike ime ya n'ụzọ ahụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ.- O doro anya, mgbe ahụ ị ga-enweta ntụgharị ahụ zuru ezu.- Mgbe ahụ ị ga-aga n'ihu na njedebe.
Otu, nkịta pointer.- Oh, ama ama ama ama- - Ọfọn, ị nwere ike itinye ụfọdụ ohiri isi n'okpuru gị, ọ bụghị na ụkwụ anọ. - O doro anya, ma ọ bụ na ị nwere ike itinye bọl mmega n'okpuru. M mere nke ahụ- O doro anya, nke ahụ na-enye nkwado dị mma.- Ọtụtụ nrụgide sitere na azụ.- Ọfọn, ọ bụrụ na ị mee Ọ bụrụ na ị dị ọhụrụ, ị nwere ike ịmalite ụkwụ gị.
Ma ọ bụ na-amalite na ogwe aka gị. Ma na oge ụfọdụ ịchọrọ ịmekọ ọnụ, ị ga-eme n'akụkụ nke ọzọ. Ozo a ute tufuru m - Ee, a ghaghi itule nguzozi gi.
Anyị nwere ohiri isi atọ n’ebe ahụ. Naghị eme ya ọsọ ọsọ. Jide ya wee laghachi nwayọ.
Mana enwere nnukwu ngwongwo n'ime ya. Ugbu a ị na-arụ ọrụ na isi gị ma ị na-arụ ọrụ na nguzozi gị, mana ị ga-enweta ahụ ike ndị ahụ ị na-anaghị enweta mgbe ụfọdụ na ụfọdụ n'ime ndị a. - N’aka nri, ọtụtụ mmadụ chere na kernel pụtara afọ, mana ị ga - arụkwa kernel ahụ azụ - N’ebe ahụ ka ha nọ, ịmara, enwere naanị ise.Brad, ana m eme ihe m na-ekwusa, ana m eme.
Ọfọn, m na-eme curls na akụkụ akụkụ - Ole ole? - Anam eme ihe ano, ano m, m eweli igwe - Onu ano nke ikwughari? - M ịdị iche, m na-ekwu. - Dabere na ụbọchị? - arefọdụ dị afọ 30. - 30? - Eeh. - Chaị. - Yabụ ee, ị nwere ike ime ọtụtụ ihe na isi mmega ahụ. - Dịkwuo olu. - Ee, maka na ọ bụ mọzụlụ ntachi obi.
Wantchọrọ ka ha rụọ ọrụ oge niile na-anwa ichebe azụ gị. --Nri, ee ee - ị kwesịrị ị na-agbagharị oge ọ bụla ị buliri ihe - ee, ọ dị ka ịgba ọsọ marathon. - N'ebe ahụ ka ị na-aga. - Daalụ maka ikiri. (Ọyụ music)
Iguzo ọtọ nwere ike ime ka isi gị sie ike?
Ha bara uru karịa ịdataiheala, ha nwekwara ike ịdị irè karị n'ihi naihena-akpalisikwuo ikeahụ siisiakwara, na-eme mmegharị kwa ụbọchị - na-aga n'ihu, azụ na akụkụ-n'akụkụ-mfe. Trainingzụ ha nwekwara ike inyere gị aka izereiheobere ihe mgbu na-abịakarị n’agadi.Jul 26. Dec 2019
Kedu ihe na-eme ụmụ okorobịa? Jeff Cavaliere, ATHLEANX.com. Taa, anyị na-ekwu maka adịghị ike abs na nke a bụ ihe ị chọghị n'ihi na mgbe ike gwụrụ gị, ha ga-emebi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmega ahụ gị.
Ya mere, taa, m ga - achọ inyere gị aka ịmata ihe ise - anyị ga - akpọ ha akara uhie - ihe ise ga - enyere gị aka ịmata ebe ị nwere adịghị ike, ma nke kachasị mkpa, ihe ị nwere ike ime iji dozie ya na-akụ ha otu otu otu. Ka anyi bido. Ihe ịrịba ama ịdọ aka na ntị mbụ na ị na-eme ihe na-adịghị ike bụ na mgbe ị na-arụ ọrụ gị, ike gwụrụ gị na hip.
Ka m gosi gị ihe atụ ebe a ụmụ okorobịa, na-eme ihe kwụgidere ụkwụ welite mgbe m buliri ụkwụ m na-ahụ na mgbe ọtụtụ ugboro ugboro, m ụkwụ na-eche arọ na m nwere ike ghara ibuli ụkwụ m ọzọ, ma m ABS na-enwe mara mma ọhụrụ; nke ahụ bụ n'ihi na m hapụrụ ikwe ụkwụ na-emegharị ahụ. Nke a ezighi ezi. Otu ihe a.
Ọ bụrụ na m nọ n'ala na-arụ mkpa Ee, nke a bụ mgbatị mgbatị isometric ma ọ bụ mmega ahụ ebe m na-ewepụ ụkwụ m n'ala mgbe niile, mana ọ bụrụ na nke ahụ anaghị arụ ọrụ, ọ bụrụ na ike gwụrụ m, m ga-ahapụ ha ka ha kwaa mmegharị ahụ ọzọ, dika o megide abs. Ihe ikwesiri ime bu igbanye ihe a. Ikwesiri ime nkwekọrịta ahụ.
N'ebe a n'elu ụkwụ na-ada ada, ị na-eweli pelvis ahụ. Na-atụgharị pelvis. Mgbe pelvis curls ma gbanwee, anyị maara na abs na-arụ ọrụ ha n'ihi na ọ bụ ihe ha na-eme.
You're na-emegharị ahụ. Anyị maara na ndị na-emegharị ahụ n'apịtị, n'aka nke ọzọ, nwere ike ịdọrọ gị na mkpọda dị n'ihu nke gbatịrị site na midsection, yabụ ịchọrọ ijide n'aka na ị ga-enwe mgbanwe n'elu ala. Otu ihe ma ọ bụrụ na m Iji mee otu ụzọ mkpa, Ana m ebuli azụ m n'ala iji weta anyị n'ime mgbanwe.
Nke a na-ebu ụzọ mee ka uru nke afọ ahụ rụọ ọrụ ma hapụ gị ka ọ na-emegharị ahụ ka ị gbaa ịnyịnya ahụ. Ysmụ okorobịa, nke ahụ bụ okwu dị ezigbo mkpa. na mmeghari afọ ọ bụla nke mere na ọ bụ ebe a ka ị ga-enwe ike ọgwụgwụ.
Ọ bụrụ na ịmee, ọ ga-abụ nnukwu ọkọlọtọ ọbara ọbara nke mgbatị na-eme ka ọkpụkpụ gbanwee, mana nke ahụ nwere ike iduga na ọkọlọtọ ọbara ọbara na-esote. Ihe ndị a bụ obere mgbu mgbe ị na-eme mmega ahụ gị. Nke a bụ ihe ị na-achọghị ịnagide, na ị chọrọ n'ezie idozi ya.
Anyị nwere ike ile anya na nke a site na ịnọdụ ala ọdịnala wee hụ ihe kpatara ya. Ọfọn, nke ahụ abụghị kpọmkwem mmega ahụ m kachasị amasị m, mana ọ bụ ihe na-arụ ọrụ, ị ga-ahụ na ọ metụtara otu n'ime uhie uhie mechara. Ma gịnị ka ị na-achọ maka ọdịnala ịnọdụ ala? You rịtuo n’ala, ị ga-ahụ nke a: Nke mbụ, ị̀ chọrọ onye ga-azọ ụkwụ gị? Tinye ụkwụ gị n'okpuru ihe - Amaara m onye ị bụ - n'okpuru ihe ị ga-eme na mmega ahụ? N'ihi na ọ bụrụ na ị bụ, ikwesighi.
Nke abuo, mgbe ị gbagote, mee ka ubu gị sie ike ma ọ bụrụ na ike adịghị gị. Gaghị ekwe ka nke ahụ mee. Ihe nke atọ bụ, ọ bụrụ na ị slam n'ala na-enweghị nchịkwa na ụzọ ala, ọ bụ n'ihi adịghị ike na-adịghị ike.
Ihe niile metụtara ya na ihe m kwuru na mbido. Nke ahụ bụ dominance nke hip flexors. Wantchọrọ iweghara mgbatị hip.
Anyị chọrọ ijide n'aka na nke ahụ anaghị eme. Ihe mbụ ị ga - eme bụ ịgbanwe etu ị si ejide ụkwụ gị. Kama ịpị ha ma kpaa ha n'okpuru ihe, ịchọrọ itinye ha maka ihe ma wepụ ya.
Anatom, nke a nwere mmetụta dị iche. Na-eme ka mkpịsị ụkwụ ahụ rụọ ọrụ site na ịdọpụ ikiri ụkwụ gị, nke na-enyere aka imechi ihe mgbochi hip, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ mee ka ha ghara ịrụ ọrụ.
kannondale jupụtara nkwusioru ugwu igwe kwụ otu ebe
Enwere m ike ịme ihe omume ndị a. Ihe nke abuo ichoro ime bu inwe ike dinara ala n’elu ala, nkewa site na nkewa. Jiri aka dee ihe spain gị n'otu oge.
Ka ị na-akwụ elu ala, tee onwe gị n ’ala, otu nke otu otu. Nke a na-ekwe nkwa na ị ga-ebu ụzọ rụọ ọrụ uru afọ, tupu mgbatị ahụ. N'ihi gịnị? Ka anyị lee ihe ọzọ.
Ọ bụrụ na anyị eburu ụzọ rụọ mgbatị ahụ, enwere m akara m site na ebe a, m na-adọta ya na ọ na-adọta Jesi na ndọtị. Ọ na-etinye ike dị oke mkpa na nkwonkwo lumbar ma ọ nwere ike na-akpata mgbu ị na-enwe. Agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị nwere ike ibalite abs, ọ bụrụ na m ga-eme ka eriri nke na-adọta na azụ, m ga-adọta otu akụkụ n'otu oge.
Ana m ekwe ka akwara afọ mee akụkụ ha. Na ụzọ azụ, lelee njikwa m nwere n'ahụ ya, ka ọ na-agbadata nwayọ nwayọ na nwayọ, na nwayọ nwayọ agbadata ala. Ga-enwerịrị nke ahụ.
Ga-ahapụrịrị ka abs gị buru ụzọ. Can'tnweghị ike ịhapụ ka eriri gị na-emegharị ahụ. A ga-ekpughere gị ọkọlọtọ na-acha uhie uhie ọzọ mgbe ị mere otu n'ime ndepụta atọ dị ukwuu gị.
Na squat, bench pịa, ma ọ bụ na-egbu egbu. Anyị maara na ọrụ nke uru nke afọ bụ ime ka mmegharị ndị a kwụsie ike ma mee ka isi ahụ dum sie ike iji mee ka mmegharị ahụ rụọ ọrụ nke ọma. Iji hichaa okporo ụzọ.
Ihe anyị anaghị achọ ebe a bụ mmụba dị egwu n'ike. Nke a kwesiri ịbụ ụdị ọrụ dị na ndabere na ọ bụ ihe na-emetụta ụbụrụ, njikọ njikọ anụ ahụ karịa ike akwara afọ niile. Otú ọ dị, ọ dị ihe ị nwere ike ime.
Ihe m chọrọ bụ ka ị nwalee onwe gị na mmemme ọ bụla ekwuru. Oge ọzọ ị ga - eme ya, gbalịa ịkwado onwe gị nke ọma dịka o kwere mee. Mgbe ị hụrụ okporo ụzọ mmanya ka mma, ịrụ ọrụ nke ọma karị, ihe niile m kwuru na mbụ; Ọfọn.
Amaara m na njikọta gị na njikọ anụ ahụ bụ ebe ha kwesịrị ịnọ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ọ dị gị ka ị nwere ike itinye 60 pound ma ọ bụ 70 pound na mmanya ahụ site na ịmalite ọrụ ike, ihe na-agwa m bụ akụkọ ọjọọ ị mereghị. Ọ na-agwa m na ị gaghị enweta nke a belụsọ ma ị lekwasịrị anya na ya na mmemme ahụ n'onwe ha.
Nke ahụ bụ nnukwu adịghị ike. Ọ bụ ezie na ọ bụ adịghị ike nke uche na akwara, ọ ka bụ adịghị ike ọ ga-agbatị isi jọrọ njọ oge ọ bụla ị na-eme omume ndị a. Karịsịa mgbe ịmalitere itinye nrụgide karịa na mmanya.
Naanị otu ụzọ ga-esi gosipụta ọkọlọtọ ọbara ọbara nke anọ bụ site n’ile anya na enyo. Ọ bụrụ n'ịhụ afọ afọ a gbara gburugburu ebe a, mgbe ahụ ị nwere ike ị na-arịa ọrịa na-adịghị ike ịchọrọ iji dozie. Nke a bụ nnukwu ọkọlọtọ na-acha uhie uhie.
Nke ahụ abụghị ihe m chọrọ, achọrọ m ka ị nọrọ ebe a, ọ bụghị ebe a, mana ebe a, ị nwere ike ịsị, 'Kedu isi ihe dị iche? Only mere nkwekọrịta naanị? 'Ee ị kwuru eziokwu. Ma ihe m mere bụ ịdọrọ eriri afọ ahụ. Enwere m ikike ibunye m transverse afo n'ihi na m nwere ike ibunye transverse afo.
Akwara a dị ka belt a dị arọ, ndị mmadụ. Ọrụ ya bụ ịgba ọsọ dịka eriri eriri a n'usoro ntinye eriri. Ọ na-eme otu ihe ahụ dịka eriri akwa.
Mgbe ọ na-eme nkwekọrịta, ọ na-agbatị. N'ebe a, ọ na-eme nkwekọrịta. Ọ na-emepụta ntakịrị a n'úkwù.
O bu ihe n’emeputa njigide a site n’ime dika eriri eriri. Ugbu a ị chọrọ ijide n'aka na ị nwere ikike ime otú ahụ. Ikwesiri ijide n'aka na ị ga - eme nke a site na ịme ya na itinye ya n'ime ya na ijikọ ya n'ime mmega afọ ọ bụla ị na - eme.
Yabụ ọ bụrụ n'ịhụ m ebe a na mkpa, ị chọghị ịgbatị mgbe ị na-emega ahụ. Ọ gabigara oke. Nke a dị umengwụ.
Kama nke ahụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịkwatu, dọrọ onwe gị ala afọ gị - afọ ala gị - iji mepụta nke ahụ ss site na ịtinye afọ gị. Chegharia echiche dika akwa belt ma wepu ihe gi na onodu obula. Otu ihe a n'oge V-Up.
Naghị ekwe ka ị gbatịa mgbe i biliri. First na-ebu ụzọ kwatuo, nkwekọrịta, ma gbagote. Nke a nwere ike belata ọnụ ọgụgụ nke usoro ị na-eme, mana ọ na - eme ka ọnụọgụ nke ogo ị na - eme.
Ka ị na-enwetakwu ike ị na-abanye n'ime afọ na-agafe agafe, obere ị ga-ahụ mgbatị a oge ọ bụla ị ga-ewepụ uwe elu gị. Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, ntakịrị ọkọlọtọ akụkụ anọ. Nke a ga-atọ ụtọ n'ihi na ị ga-enweta ohere ịme ihe ndị a.
Nsogbu ndị ahụ kwesịrị ịbawanye. Hụ ma ị ga-anọnyere m anọ a. Nke mbụ mara mma dị ka Jesi ga-egosi.
Naanị ihe m chọrọ bụ ka ọ si n’elu ụlọ pụọ. Achọrọ m ka ị nwee ike ime otu ihe ahụ. Kedu ka ị chere si mee nke ahụ? Obi dị ya ezigbo ụtọ.
Ma dị ka ị pụrụ ịhụ, anọghị m n’ihi na Jesi jiri aka ya mee ihe. Hụ, Achọrọ m ka ị nwee ike ịpụ n'ala na-ejighị aka gị. Nke a na-agụnye iwetu ikpere gị na aka gị n’elu ikpere gị n’elu ebe kwụ ọtọ na-enweghị ịdabere n’aka gị.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịdabere na aka gị, ọ na-egosi na nkwụsị gị adịghị ike. Ugbu a, ị nwere ike ịnwe ike ma lee ule a. You ka ga-eche na ọrụ gị na-arụ ọrụ iji nweta gị ebe ahụ.
Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe kwesịrị ime. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịnweghị ike ibili na-enweghị aka gị, nke ahụ bụ nnukwu ọkọlọtọ na-acha uhie uhie na ikekwe ị gaghị enwe ike ịga n'ihu na ule ndị a. Ọ bụrụ na i mere ya, ka anyị gaa n’ọkwa ọzọ.
Na-esote, ịchọrọ ịnwale ụgbọelu ọ bụla n'otu n'otu. Nke mbụ bụ ụgbọelu dị n’ihu. Nwere ike igbochi akụkụ ije n'akụkụ akụkụ? Zọ kachasị mfe iji nwalee nke a bụ na onye na-ebu akpa, ihe niile ị ga-eme bụ iburu dumbbell na ọkara ahụ gị wee gbalịa iburu ya n'apata mgbatị ahụ - ma ọ bụ 30 sekọnd - na-enweghị ubu na-ama jijiji na ebu n'akụkụ.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị nwere ike ịga ije ebe a, na-agagharị na-enweghị ịdabere na spain gị n'akụkụ nke a kwụrụ? Iji mee nke a, ịchọrọ ezigbo nguzosi ike nke afọ na ike n'akụkụ ọzọ. Emeghị nke a bụ nnukwu ọkọlọtọ na-acha uhie uhie ka anyị kwesịrị inwe ike igbochi mmegharị, ọ bụghị naanị na ọkwa a mana na atọ ahụ, anyị nwere nyocha ndị ọzọ na gị ugbu a, ọ bụ ọkọlọtọ ọbara ọbara na ihe ịchọrọ ịrụ ọrụ. Ọ bụrụ na ị dị mma ebe a, anyị nwere ụgbọ elu abụọ ọzọ n'ihu anyị.
Ugbu a anyị abịarute mmemme ma ọ bụ ule ọzọ anyị. Ọ bụ planknger plank. Ihe anyị na-anwa ịchọta ebe a bụ gịnị bụ nkwụsi ike gị na ndọtị? Kedu ihe nwere ike ịme gị site na nkwụsị gị ma gbochie ịba ụba nke midsection gị? N'ihi na ihe dị egwu bụ oghere lumbar gị.
Ọ bụghị ihe ịchọrọ, ọ bụghị naanị inwe ike iji aka gị dina ụra n'elu ahụ gị. Chọrọ inwe ike ịkwado ogologo oge o kwere mee. Karịsịa ebe ọ bụ na anyị na-eji nke a na ndị na-eme egwuregwu na ndị nabatara ya.
Ọ bụrụ na onye nọ n'ọnọdụ a adịghị ike ma ọ bụ bụrụ onye na - enweghị ike - ọkachasị ma ọ bụrụ na ha na - aga ịchụ nta dịka Antonio Brown - ị nọ na nsogbu. Anyị chọrọ ijide n'aka na ị nwere ike ime nke a ma jigide ọnọdụ a ọ dịkarịa ala 30 sekọnd na ogwe aka gị n'elu isi gị na nkwụsị gị siri ike. Ọ bụrụ na ị nweghị ike, ndị be anyị, mgbe ịchọtara onwe gị ka ị na-akụda ma ọ bụ na-etinye nrụgide dị ala n’azụ gị; Are esighi ike.
Ga-emeso nke a tupu ị nwee ike ịga n'ihu. Ọ bụrụ na ị dị mma ị nwere otu ihe ọzọ ị ga-eme. Ngbanwe nke mgbanwe.
N'ikpeazụ, Achọrọ m ijide n'aka na ị nwere ike igbochi ntụgharịgharị achọghị. Anyị nwere ike ime nke a ebe a na ntọala USB. Ihe ị ga-eme bụ itinye ọkara ahụ gị n’ịdọ.
Gaa gawa ebe aka gị dị nso n’obi gị. Ugbu a gbatịa aka gị pụọ n'ahụ gị. Nile, dị ka o kwere mee.
Na-amụba ogwe aka oge, ị na-ebuwanye ibu, ị na-eme ka isi ihe dị mkpa. Na-anwa ego ọ bụla iji gbochie ọbụnadị anụ ọhịa site na ịghaghachi azụ na igwe n'onwe ya. Wantchọrọ ijide n'aka na ị nwere ike ijide ọnọdụ a maka 10 sekọnd oge ọ bụla, ma gbalịa ime ya ngụkọta nke abụọ ruo ugboro atọ na usoro Ntugharị ọ bụla iji jide n'aka na ị nwere ike igbochi ntụgharị dị oke. t, ọzọ, ọ bụ ọkọlọtọ ọbara ọbara.
Ya mere, e nwere ya ụmụ okorobịa. Enwere akara uhie ise iji nyere gị aka ịchọpụta ma ị nwere adịghị ike afọ, ana m ekwe gị nkwa, na-eleghara ha anya ma ọ bụ na-ekpochapụ ha n'okpuru ihe mgbochi n'ihi na ị chere na ị ga-ejide ha otu ụbọchị agaghị arụ ọrụ. Ọ dị mkpa karịa na ị hụrụ ha wee lee ha anya n’ihu ma mee ihe banyere ya ozugbo.
Nke bụ eziokwu bụ na, ndị bekee, ị nwere ike ịnwe ọhụụ. Nke a abụghị ihe na-egosi ma ị nwere nke ọ bụla n’ime adịghị ike ndị a. Ọ bụghị ihe gbasara etu esiri ahụ gị n'èzí, etu ha si arụ ọrụ, yana ike ha si n'ime, nke kachasị mkpa.
Ọ bụrụ na ị na-achọ mmemme iji nyere gị aka na nke a ma wulite ya n'ihe niile anyị na-eme n'ihi na anyị maara mkpa ọ dị, mmemme anyị niile dị na ATHLEANX.com. Ka ọ dị ugbu a, ọ bụrụ na ederede ederede na-enye aka, hapụ echiche gị na isi aka gị n'okpuru.
Mee ka m mara ihe ọzọ m ga-ekpuchi ma aga m eme ike m niile iji mee gị nke a n'ụbọchị na izu ndị dị n'ihu. Ọbụna ma ọ bụrụ na ịdenyeghị aha, mee ya Biko mee nke a ma gbanye ọkwa gị. Ugbu a ị nwere ohere iji merie ụfọdụ mmemme n'efu na ATHLEANX ma ọ bụrụ na ịmee.
Lelee njikọ dị n'okpuru iji chọpụta otu. Ngwa ndi oma, anyi ga ahu gi n’oge na adighi anya.
Oge agafeela idozi ọnọdụ m?
N'agbanyeghị afọ ole ị dị, ọ dịghị mgbe ọ bụlaakaha iji melitenke gipostcho. Maka enyemaka ọzọ na gịpostchoma ọ bụ nke ọ bụla n'ime ọtụtụ ọnọdụ anyị na-emeso, ịtọọ oge nleta na Yale Neurosurgery New London taa.
Kedu ka m ga-esi hie ụra iji dozie ọnọdụ m?
Dọọnke giikpere n'ala ntakịrịnke giobi. Ohiri isi makanke giisi kwesiri idebenke gispain ogologo. Otu akwa nhicha akwa ma ọ bụ obere ohiri isi n'okpurunke giúkwù nwekwara ike inyere nkwadonke giọkpụkpụ azụ. Fanye ohiri isi n'ime uzo di n'etitinke giahu na akwa.
Olee otu m ga - esi mee ka isi m sie ike maka iguzo?
Guzo ma jiri obosara saa mbara, jidesie bọọlụ ma ọ bụ dumbbell were aka ya abụọ, setịpụ aka n'ihu obi. Idebe ogwe aka kwụ ọtọ na ubu pịa ala, bugharianke gielu ahụ gaa n’aka nri wee laghachi n’etiti. Mee iri ugboro 10 gaa n'aka nri na 10 gaa n'aka ekpe. Sideszọ ọzọ maka 10 reps.
Standingguzo na-arụ akwara?
Guzoka mma maka azụ karịa ịnọ ọdụ. Ọ na-ewusi ụkwụ ikemọzụlụma melite nguzozi. Ọ na-ere ọkụ karịa calorie karịa ịnọdụ ala. Ọ bụkwa nnukwu ihe ngwọta nke ikpuchi ọbara na mkpịsị ụkwụ ya dị omimi.08.30.2010
Nwere ike idozi ọtụtụ afọ nke ọnọdụ ọjọọ?
Ọbụnaọ bụrụnke gipostchoabụwo nsogbu nyeafọ, enwere ike imeziwanye ihe. Ejiri ubu na ichota ihe nwere ike iyi ka ha etinyela na nkume site n'ogeanyịiru afọ ole, nagịnwere ike ichegịEchefuola ụgbọ mmiri ka mmapostcho. Mana enwere ezigbo ohereị nwere ikeka guzoro ogologo.01.12.2019
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji dozie ọnọdụ ọjọọ?
“Thibọchị iri atọ nwere ike ime ezigbo iherụọ ọrụ, n'ihi na nyocha gosiri na ọ bụna-eweIzu 3 ruo 8 iji guzobe usoro. Ntuziaka a ga - enyere gị aka ịme usoro ụtụtụ, abalị, na ịnọdụ ala ga - abara gị urupostchona ahụ dum, ”ka Marina Mangano, onye guzobere Chiro Yoga Flow na-ekwu.
Kedu ụdị mmega ahụ m kwesịrị ịme iji meziwanye ọnọdụ m?
N'ihi na a siri ike isi, ihe omume mkpa kwụsị gị abdominal mọzụlụ tinyere traverse abdominals. Ihe ndị a bụ ụzọ ole na ole dị mma ị ga - esi mee ka isi gị sie ike ma melite ahụ gị. Omume a Pilates na-ele anya n'azụ gị, ubu gị, ị na-eme ka ọ dị mma iji meziwanye ọnọdụ gị na ụdị njem gị.
Kedu ka esi meziwanye nguzo na imeghari?
Omume a Pilates na-ele anya n'azụ gị, ubu gị, ị na-eme ka ọ dị mma iji meziwanye ọnọdụ gị na ụdị njem gị. Iji mee mgbatị ahụ nke ọma, dinara ala hụ na e meghere aka gị na ụkwụ gị n'ụdị ụdị 'X' n'ala. Jiri nwayọ bulie obi gị, ogwe aka gị, na apata ụkwụ gị n’ala.
Kedu ụzọ kachasị mma iji mee ka isi gị dị ike?
Ka ị mezue ihe omume ndị a, ọ dị mkpa ka ị na-eku ume nke ọma iji tinye isi ma wusie ya ike. Iku ume site n'ọnụ ka ị na-adọpụ otubo gị wee tụgharịa na spain gị iji kpoo gị abs. Omume a na - ewusi abdominis dị ike - okpukpu isii - yana nke ime na mpụga.